သတိပေးချက်။ အသစ်စက်စက် LEGO အတွဲများစွာကိုဖြန့်ချိတော့မည်
အသစ်အဆန်းမျိုးစုံ Lego အစုံများသည်တရားဝင်အွန်လိုင်းစတိုးတွင်ဖြန့်ချိရန်နာရီသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာရှိသည် Star Wars သို့ Ideas.
နောက်ဆုံးပေါ်ပစ်လွှတ်မှုမှ Star Wars Ultimate ကိုစုဆောင်းထားသော Series မော်ဒယ်များသည် US သို့ရောက်ရှိလာသောနွေရာသီအစုလိုက်အပြုံလိုက်၊ သြဂုတ်လသည်စျေး ၀ ယ်သူများအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားစရာလတစ်လဖြစ်ပုံရသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ်းလှမ်းချက်မျိုးစုံကိုပင်မပြောခဲ့ပါ။
လာမည့် Lego စျေးဝယ်ရာသီသည် start ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းသန်းခေါင်ယံ၌သို့မဟုတ် နည်းနည်းစောတယ် UK ရှိသူများအတွက် မည်သည့်အကြောင်းအရာကိုသင်ပိုနှစ်သက်ပါစေ Marvel သို့ စူပါမာရီယိုတည်ဆောက်သူတိုင်းအတွက်တစ်ခုခုနဲ့မင်းနဲ့အဆင်ပြေဖို့သဘောတူညီချက်တစ်ခုရှိတယ်။
သဘောတူညီချက်များအနက်အကြီးဆုံးသည်အခမဲ့ဖြစ်သည် Lego Ideas 40487 Sailboat စွန့်စားမှု ဒေါ်လာ ၂၀၀ နှင့်အထက်အော်ဒါများ အခြားဒေသများအတွက်ကန့်သတ်ချက်ကိုအတည်မပြုရသေးသော်လည်းဤကမ်းလှမ်းချက်သည်အလားတူလိုအပ်သောကုန်ကျစရိတ်မြင့်မားစွာဖြင့်ကမ္ဘာအဝှမ်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်နိုင်သည်။
အထူးသဖြင့်ချစ်မြတ်နိုးသူများအတွက်ထိုစျေးနှုန်းသည်မခက်သင့်ပါ Star Warsအမေရိကန်၊ သို့မဟုတ်နှစ်ခုလုံးတွင်နေထိုင်ပါ။ သြဂုတ်လ ၁ ရက်သည်အတော်ကြာသည်အထိဖြန့်ချိမည့်ရက်ဖြစ်သည် Lego အပါအဝင်အစုံ 75309 သမ္မတနိုင်ငံ Gunship (ပြန်လည်သုံးသပ်)၊ လူထုမှမဲပေးသည့်အတိုင်းလာမည့် UCS တည်ဆောက်သည်။ လူကြီးများအတွက် Lego 10279 Volkswagen က T2 ကို Camper ဗန် အသေးစိတ်တည်ဆောက်မှုနှင့်အတွင်းခန်းအပြည့်အစုံပါ ၀ င်သည် classic မော်တော်ယာဉ်ချစ်သူများသည်မြင်သည့်အတိုင်းခံစားရန် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်.
စျေးနည်းသောအရာများတွင်၊ သေးငယ်သည့်မော်ဒယ်များအပါအ ၀ င်သန်းခေါင်ယံတွင်ရောက်ရှိလာလိမ့်မည် စူပါမာရီယို Luigi St နှင့်အတူ 71387 Adventuresartသင်တန်း နှင့်နိဒါန်း multiplayer ဆောင်ပုဒ်သို့။ အမေရိကန်ရှိဈေးဝယ်သူများသည်အခြားဒေသများ၌ဖြန့်ချိပြီးသားနွေရာသီလှိုင်းများကိုအမီလိုက်နိုင်လိမ့်မည်။
ဆက်နေရန်ညှိ Brick Fanatics ရာသီသစ်အဖြစ် Lego အစုံသည်ငါတို့အပေါ်၌ရှိသည်၊ ငါတို့သည်နောက်ဆုံးပေါ်တရားဝင်ဖန်တီးမှုများဖြန့်ချိမှုအဖြစ်မင်းကိုနောက်ဆုံးပေါ်တင်လိမ့်မည်
← Lego Star Wars Mandalorian Forge ဒေသတွင်းစျေးနှုန်းများကိုဖော်ပြခဲ့သည်
LEGO Masters Germany Season3ပြိုင်ပွဲဝင်များအားကြေငြာလိုက်သည် →